महिलाले पुरुषको वी र्य खाएको अवस्थामा ‘गर्भ’ रहन्छ ? – Jagaran Nepal
महिलाले पुरुषको वी र्य खाएको अवस्थामा ‘गर्भ’ रहन्छ ?
प्रश्न रोचक छ। वी र्य नि’लेको भरमा ग र्भ त रहँदैन, तर मु’-खमै’-थुनका पारखीले गु’-दद्वा र मै थुन र यो नि मै थुन पनि गर्ने हुँदा यी सबै मै थुन एकै सेटिङमा हुन गएको खण्डमा ग र्भ रहन गयो भने भ्र म पैदा हुन सक्छ। वी र्य पनि अन्य खाद्यवस्तु जस्तै हो। यदि वी र्य पिएको वा नि’लेको खण्डमा घाँटी, खाद्य नली हुँदै पे’-ट (आमा’शय) मा पुग्दा त्यहाँ रहेको अम्लले यसलाई पनि पचाउने हुनाले नि-लेको वी र्यका कारण ग र्भ रहने सम्भावनै हुँदैन। तर, पुरुष पा र्टनर कतिपय यौ -नरो’गबाट सं क्र-मित छ भने निलेको वी र्यमा रहेको धा’तुमेहका की’टाणु तथा क्लेमिडियाका कारण घाँटीको सं क्रम-ण हुनसक्छ। यसका साथै यदि महिला पा’र्टनरको मुखमा आ-लो घा उ छ भने एचआ ईभी सर्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ।
वी र्यमा हुने विभिन्न तŒवमध्ये शु क्र-की’ट पनि एक हो। सन्तान उत्पादन गर्न सक्षम हुनका लागि वी र्यमा निश्चित संख्यामा शु क्रकी’टको संख्या हुनुपर्छ। यिनको बनावट र चाल पनि निश्चित हुन्छ। कतिपय मानिसले औँलामा रहेको वा टाँसि एको वी र्यका कारण औँलाले यो नि चलाएको खण्डमा ग र्भ रहन्छ कि भन्ने जिज्ञासा राखेको पनि पाइन्छ। वास्तविकता के हो भने यो निभित्र स्ख’लित वी र्यमा रहेको शु क्रकी’ट पाँच दिनसम्म बाँच्न सक्ने भएपनि बाह्य हावाको स-म्प’र्कमा आएलगत्तै वी र्य सुक्न थाल्ने हुनाले शु क्रकी’ट धेरै समयसम्म जीवित रहन सक्दैन। अतः वी र्ययुक्त औँलाका कारण ग र्भ रहने सम्भावना खासै हुँदैन।
वी र्यमा करिब ८० प्रतिशत पानी र केही अंश प्रोटिन हुन्छ। यो प्रोटिनको स्रोत भएपनि वी र्य नि’ले-कै भरमा प्रोटिन प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। किनकि, प्रोटिनकै लागि वी र्य से वन गर्ने हो भने यसको मात्रा धेरै हुनुपर्छ। वी र्यमा अवसाद (डिप्रे सन) निरोध तŒव हुने हुनाले यौ- निक गतिविधिका क्रममा वी र्य निलेको वा वी र्यको सम्प र्क आएको खण्डमा ‘मु-ड’लाई ठीक ठाउँमा ल्याउने विश्वास गरिन्छ। त्यसैगरी, वी र्यमा मेलाटोनिन नामक ह’र्माे-न पनि हुन्छ। यसले मानिसको निद्रा चक्रलाई नियमन गर्ने हुनाले यौ न का’र्यपछि मीठो निद्रा लगाउँछ। तर, कतिपय महिलालाई भने वी र्यको एल र्जी पनि हुन सक्छ।